Kerry Galhos, Ho “Serena Williams” Ao Timor-Atsinanana ? · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Dalia Nandika (es) i María Angélica Marín, Emmanuelle Marmion, Candy
Voadika ny 28 Avrily 2016 3:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, Português
Nahazo vatsimpianarana iray avy amin'ny Anjerimanontolon'i Texas, any Etazonia i Kerry Galhos. Sary: Media Connection, nahazoana alàlana.
[Rohy mitondra ho amin'ny teny Anglisy raha tsy misy fanamarihana]
Tsy ela akory izay dia “nalefa” tany Etazonia mba hianatra sy hanohy ny diany mahabe fanantenana amin'ny maha-matianina amin'ny lalao tennis azy i Kerry Galhos, tovovavy tanora mpilalao Tennis avy ao Timor-Atsinanana.
Noho ny fanampian'ny fianakaviany, nandao an'i Timor-Atsinanana i Kerry tamin'ny 2009 mba hianatra tao Aostralia. Ny fianakaviana Rapkins no nandray azy tany Brisbane, fianakaviana izay mitantana ivontoerana iray filalaovana tennis ary tsy nitsahatra nandrisika azy tsy hiala amin'ny nofinofiny ho lasa mpilalao matianina amin'ny tennis. Avy eo izy nankao amin'ny ivontoerana Study & Play (Mianatra & Milalao), ary tamin'ny 2013, dia i Chris Bates, ilay Amerikàna mpanorina azy io mihitsy no nanolotra azy ho afindra any Etazonia mba hahazo « teknika mamiratra ». Nanomboka teo dia tafiditra ho anatin'ny « fianakaviana USTA » i Kerry, ary tafiditra tanteraka tao amin'ny Anjerimanontolon'i Texas ao San Antonio.
Tamin'ny alàlan'ny fianakaviana Rapkins, izay monina any ambanivohitr'i Beenleigh, any Brisbane, i Kerry no naseho tamin'i Chris Bates, mpanorina ny Study & Play any Etazonia ; ity farany no nanapaka hevitra hanohana ity fanantenana tanora ity sy nandefa azy ho any Etazonia. « Tsy misy teny ho entina mamaritra izay tsapako amin'izao fotoana izao, ny hany azoko atao dia ny misaotra ny fianakaviana Rapkins nanampy ahy hahatateraka ny nofiko », hoy ny fanambaràn'i Kerry nandritry ny tafa nataony ho an'ny bilaogy Kiakilir.
Voaray manokana tany Timor-Atsinanana io vaovao io, toerana izay nandefasana antso ho an'ireo taranaka hoavy ao amin'ny firenena sy ireo any ampielezana hàka ohatra amin'ny nataon'i Kerry. Nadikan'ny bilaogy Kiakilir ho amin'ny fiteny Tétoum, fiteny ofisialy ao Timor-Atsinanana, ny tantaran'i Kerry. Armando Gama maneho hevitra hoe :
Tantara manintona afaka hanentana ireo tanora hanatanteraka ny nofiny.
Mendrika hanaovana topimaso ny tantaran'i Kerry : indro tovovavy iray nandao ny firenena kely iray izay, fotoana vitsy lasa izay, lehibe toa an'i Indonezia ary lasa nahaleotena taorian'ny 25 taona nibodoana azy sy 400 taona mahery nanapahan'ny portiogey mpanjanatany azy [fr].
Feliciade Neto, avy ao Timor-Atsinanan ihany koa, manoratra hoe :
Inty aho, faly hanaparitaka ity vaovao tsara ity.
Azoko antoka fa miaraka amin'ny faharisihany sy ny finiavana rehetra ananany, ho tanteraka ny nofiny.
Arahabaina ry Kerry, ianao no ho loharanon'ny tosika ho an'ireo tanora eto amin'ity firenena malalantsika ity.
Tantaranà herimpo, fandavantena sy fahalalahan-tànana
Nanohana ahy hatrany am-piandohana ny fianakaviako, ary tena nanao fandavantena goavana mba hahafahako nandeha, ary mbola noho izy ireo ihany koa no maha-eto ahy. (Kerry Galhos)
Teraka tao Dili tamin'ny 9 Aogositra 1995 i Kerry Galhos, ary izy no zokiny amin'ireo telo mianadahy mpiray tampo ; hatrany amin'ny fahazazàny, nasehon'i Kerry ny fahaizana ara-panatanjahantena nananany, ary indrindra fa ny tennis manokana, izay toy ny voasoratra ho asany. Na dia tomponandraikitra amin'ny fanohanana ny fianakaviany ho fanabeazana ireo anadahiny roa aza, tsy nitsahatra nandrisika azy tsy hihemotra amin'ny nofinofiny ireo ray aman-drenin'i Kerry. Vitan'izy ireo, nony farany, ny nandefa azy tany Aostralia. « Amin'ny maha-tanoran'i Timor-Atsinanana sy mpisolo tena ny hoavin'ny firenetsika antsika, andraikitsika, isika tanora, ny manome ny tsara indrindra avy amintsika sy mifofota araka izay tratra amin'ny fianarantsika mba ho fandraisana anjara amin'ny fandrosoan'ny firenentsika », hoy ity mpilalao ity, izay niteraka ity fanehoana hevitra avy amin'i Aroe Schultz ity :
Arahabaina ry Kerry, feno fideràna anao sy ny fianakavianao aho, ary ho an'ny ezaka niarahanareo nanao hahatanteraka ny nofinao. Tsaroako ny tafa iray niarahana tamin'ny CPA izay nanaporofoan'i Kerry ny faharesen-dahatra nananany sy ny fahamatorany… amin'ny fanantenana fa indray andro any ho averin'ireo namana ao amin'ny CPS ho alefa ilay fanadihadiana an'i Kerry tao amin'ny fahitalavitra… Antenaiko ny hiverina hahita azy iny indray. Mirary soa, manoroka anareo aho.
Ilay Serena Williams ho an'i Timor-Atsinanana
Ny an'i Kerry dia mampahatsiahy ny làlana nizoran'i Serena Williams [fr], izay mitovy tsy misy valaka amin'ny lasan'ny fianakavian'ilay mpilalao avy ao Timor-Atsinanana ny an'ny fianakaviany. Nivoaka avy aminà fianakaviana mahantra, tsy dia nanana fanantenana ny amin'ny hoavy, vitan'i Williams ihany na izany aza ny nandao ny toerana izay nandiavany fiainana sarotra. Toy izany koa, tsy niala tamin'ny nofiny ilay amerikàna mpilalao ary nandresy ireo sakana rehetra. Fantatra ankehitriny ho iray amin'ireo mpilalao mendrika indrindra erantany amin'ny tennis, i Serena Williams no aingam-panahy nanosika an'i Kerry Galhos :
i Serena Williams no ilay olona nanosika ahy hilalao tennis. Ny heriny sy ny fikirizany no lasa ohatra ho ahy mba handrisika ahy misimisy kokoa sy nanampy ahy tsy hiala an-daharana. Deraiko be izy saingy mbola tsy tratrako ny lentany.
Nandrisika ireo rehetra mponina ao Timor-Atsinanana i Kerry « mba tsy hanary fotoana, tsy ho kivy , hanararaotra izay fotoana rehetra mitranga ary hitolona », satria :
Mila antsika rehetra i Timor-Atsinanana.
Nandika (es) i María Angélica Marín
Fahalalahàna miteny 22 Desambra 2020
Fahalalahàna miteny 24 Jona 2020
Media sy Fanoratan-gazety 05 Jolay 2019